ध्यानस्थ प्रधानमन्त्री - परिहास - नेपाल
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले हालै भनेका छन्– अब सरकारको ध्यान पूरै विकासमा केन्द्रित हुनेछ । किनभने, अब सरकारसँग पर्खने समय पनि छैन । त्यसैले सरकार अब पूरा विकासमै केन्द्रित हुनेछ । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले अस्ति जे भने, सरकार अहिले त्यही गरिरहेको छ । पूरा विकासमा ध्यानस्थ ।
भर्खरकै कुरा हो, हाम्रो टोलमा पनि एउटा नराम्रो घटना भयो । त्यसो त, त्यस्ता नराम्रा घटना अहिले टोलटोलमै भइरहेका छन् । भन्नुको मतलब बालिका अपहरण, त्यसपछि बलात्कार, अनि हत्या । तर प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । अत: न्यायको याचना गर्दै एक बथान टोलेसँगै म पनि बालुवाटार पुगेँ । यसबारे प्रधानमन्त्रीकै सहयोग माग्नुबाहेक अर्को उपाय पनि थिएन । बालुवाटार त पुगियो, सुरक्षागार्डले हामीलाई प्रधानमन्त्री भेट्न दिएनन् । सोध्यौँ, “किन भेट्न नदिने ? हामीलाई नभेटी नहुने अवस्था छ ।”
गार्डले भने, “अहँ, भेट्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पूरा विकासमा केन्द्रित भएर ध्यानस्थ हुनुहुन्छ । अहिले यो बलात्कार–सलात्कारको कुरा गरेर उहाँको ध्यान भंग गर्न मिल्दैन ।”
हामीले भन्यौँ, “कसरी मिल्दैन ? यहाँ त हामीलाई मर्का परेको कुरा छ ।”
“आफ्नो मात्र होइन, उहाँको मर्का पनि बुझ्नोस् न तपाईंहरु,” गार्डले भने, “यत्रो वर्षपछि देशमा दुई तिहाइको सरकार आएको छ । यस्तो बेला विकास नगरे कहिले गर्ने ? यस्तो विकास गर्ने समयमा बलात्कार, हत्या, लुटपाट, चोरी, डकैटी, भ्रष्टाचार, अपहरण, ठगी, बेपत्ता, गुन्डागर्दीजस्ता सानातिना कुरा नगर्नोस् तपाईंहरु । अहिले त्यतातिर ध्यान दिने फुर्सद पनि छैन उहाँको । लौ फर्किनुस् तपाईंहरु ।”
गार्डले भनेपछि हामीले पनि प्रस्टै बुझ्नेबाहेक अर्को विकल्प त्यहाँ देखिनौँ । हामी प्रधानमन्त्रीको ध्यान भंग नगरेरै फर्कियौँ ।